.Lọ > Ngwaahịa > Nkpuchi N95 Class
NIOSH N95 Nkpuchi Flat Dust Mask, N95 Mask
Buyzụta NIOSH N95 echetara aka Mkpuchi Mkpokọ Nkịtị, N95 Mask online iji kwụsị mgbasa nke ụmụ irighiri mmiri.Mask bụ ịkwụsị mgbasa nke ụmụ irighiri mmiri, iji gbochie mgbasa nke nzuzo na ndị ọrịa, igbochi nje bacteria, nje, wdg.
Enwere ike eyi akwa ihu N95 Disposable Safety Face Mask maka ụbọchị 2-4, mana ekwesịrị ịdechi nkpuchi ahụ ma mechie ya iche. Ghichaa aka gi tupu i wepu ihe nkpuchi a oge obula, n’etinyeghi aka nke nkpuchi.
N95 akwụkwọ nchekwa Flat Dust Mask
N95 Certified Fold Flat Dust maskProduct nkọwapụta nke N95 gbaara mkpu mkpuchi ụgbọ elu: asambodo: NIOSH N95 ihe enyere aka: mmetụta arụghị ọrụ: N95 (â ‰ ¥ 95%) GB2626-2006The headband na-egbochi oge 10s na esemokwu nke 10N
N95 Dust Mask Disposable Anti-Pollution And Smog: N’oghere mkpuchi ụlọ: flatdị larịị apịtị ga-adị nso na ihu, na imi imi na-agbazi agba na nke na-enye ntaramahụhụ dị mma ma dị mma. Igwe na-agbanwe agbanwe na akwa akwa nwere ike imeghari na ụdị dị iche iche
Mpempe Flat Style Anti Haze Face Mask Na Valve
Mechie N95 ọkara ihu nkpuchi
Nkọwa dị mkpirikpi banyere Nkpo N95 ọkara ihe mkpuchi ihu ihe dị nro, dị mma maka ogologo oge iji ihe nkpuchi iji zere mgbu ma ọ bụ nfụkasị nke anụ ahụ na-akpata.
Nkpuchi N95 Class Azụ ahịa Nkpuchi N95 Class nke emepụtara na China site na ụlọ ọrụ anyị. Anyị ụlọ ọrụ a na-akpọ Zhongxinchuang. nke bụ otu n’ime ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ihe si China. Nabata ịzụta Nkpuchi N95 Class jiri ọnụ ahịa dị mma nke nwere CE, FDA, COI, PMD Act na NIOSH. You chọrọ ndepụta ọnụahịa na nkọwapụta? Ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwekwara ike ịnye gị.